Soo dejisan Collage Maker 3.80 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaCollage Maker
Collage dilana – software ah dhejintu deg deg ah images iyo sawiro. Software ka kooban qalab badan oo ay ku dareen leh soo jeeda, marto, qoraalka, isla ekeynta warejin of images iwm yaan ka Collage ka mid ah tiro badan oo ah sida diirada, stamps iyo saameynta kala duwan, kuwaas oo user ka codsan kartaa in la abuuro sawirrada shaqeeyaan. Iyada oo taageero ka dhisay-in module software ah u saamaxaaya in ay Customize muuqaalka ama size of images iyo in la abuuro mashaariic kala duwan oo si toos ah. Sidoo kale yaan ka Collage kuu ogolaanaya in aad ku badasho sawirrada kala duwan la saaxiibo by email.
The set oo ah qalab si ay ula shaqeeyaan sawirrada
Tiro wayn ee saameynta kala duwan
Abuuridda Automatic mashaariicda
Kartida in ay is dhaafsadaan sawirrada by email
Soo dejisan Collage Maker
Faallo ku saabsan Collage Maker
Collage Maker Xirfadaha la xiriira